Web ကမင်းရဲ့ mojo ကိုခိုးသွားပြီလား။ ဤရေဒီယိုအစီအစဉ်များမှနားထောင်ပြီးရှာဖွေပါ
၎င်းသည်အင်တာနက်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများဖြစ်ပါစေ၊ ကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်အမြဲမပြတ်လှုံ့ဆော်မှုသည်လူသားများအတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်တော်တော်များများက၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်အလွန်အကျွံရှာဖွေနေကြသည်။ ဂယ်ရီသည်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏ထူးခြားသောအားနည်းချက်ကိုဂရုပြုခြင်းဖြင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကိုစစ်ဆေးသည်။ မှတ်ချက် - ဒါတွေဟာအများပြည်သူရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနမှာထုတ်လွှင့်တဲ့“ эфирကျော်” အစီအစဉ်များဖြစ်တယ်။
အထူးဧည့်သည်များအပြင်, ပြပွဲပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်း, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုအခက်အခဲများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအတွက်အစွန်းရောက်သောအပြောင်းအလဲ uncharacteristic လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, ဦးနှောက်မြူနှင့်ယားယံခြင်း, အဖြစ်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ, ဒုက္ခရပ်တန့်ဖို့တင်းမာမှုစူးစမ်းနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာ obsessive-compulsive ရောဂါလက္ခဏာတွေ။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: "သင်၏ Cyberex Jungle ၌သင်၏ ဦး နှောက်" ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုသိကောင်းစရာများဖြစ်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်အဖြစ်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဆေးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်လျှင်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တွေ့ပါ။
အစီအစဉ်များ - ကာလစဉ်အစဉ်လိုက်
"ဒီအခြား Porn စမ်းသပ်မှု" (ပြပွဲ #1)
"Super-လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အင်တာနက်က babyish" (ပြပွဲ #2)
"အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တနာတစ်ဦးထက်ဖြစ်သနည်း" (#3 ပြသ)
"ငါသည် porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားသောအခါအဘယ်ကြောင့်ငါဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေရပါသလဲ" (#4 ပြသ)
ဂယ်ရီအင်တာဗျူးအလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Reddit / NoFap ၏တည်ထောင်သူ (ပြပွဲ #5)
ဂယ်ရီအင်တာဗျူးများ Wendy Maltz, 'အဆိုပါ Porn Trap' 'ပူးတွဲရေးသားသူ (ပြပွဲ #6)
ဂယ်ရီဟာဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် (ပြပွဲ #7) ဆြေးြေိံး
ဂယ်ရီ (#8 ပြသ) porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆြေးြေိံး
ဂယ်ရီနှင့်ဂါယူဆပါသည် (#9 ပြသ) porn-related ED ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဆွေးနွေးရန်
ဂယ်ရီအင်တာဗျူး "porn ထဲက" စာရေးဆရာဘရိုင်ယန် McDougal (ပြပွဲ #10)
ဂယ်ရီအင်တာဗျူးများကုထုံး Wendy Maltz (ပြပွဲ #11)
အင်တာနက် Porn: လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ယုံကြည်မှု (ပြရန်နံပါတ် ၁၂)
အသုံးပြုသူပြန်လည်ထူထောင်အသစ်အဆန်း၏ဆွဲဆောင်ဆွေးနွေးထားပါတယ် (#14 ပြသ)
ဂျော့ခ်ျ Collins, porn စွဲ (ပြပွဲ #15) ဆြေးြေိံး, ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူနှင့်စာရေးဆရာပြန်လည်ကောင်းမွန်
porn, တင်းမာမှု, သည်းခံမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ morphing (#16 ပြသ)
porn, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက် (ပြပွဲ #17)
JDoe သည်သူ၏ porn အတွေ့အကြုံကို (ပြပွဲ #18) အကြောင်းကိုဂယ်ရီနှင့်အတူပြောတတ်
ဂယ်ရီ (#19 ပြသ) porn-သွေးဆောင် ED ၏မီဒီယာလွှမ်းခြုံဆြေးြေိံး
ဂါယူဆပါသည် (#20 ပြသ) porn-သွေးဆောင် ED နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖွကွေား
Brett (#21 ပြသ) porn တွေကိုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကရှင်းပြသည်
Www.GettingStronger.Org အိမ်ရှင် Todd Becker က (#22 ပြသ) စွဲနောက်ပြန်ဆုတ်သူ့အကြံပြုချက်များကိုမျှဝေ
HOCD: ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးသနည်း? ဘယ်လိုတဦးတည်း recover သနည်း? (#23 ပြသ)
သူကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းထွက်ခုတ်ဖြတ်အဘယ်ကြောင့် "လိင်ဘုရားသခငျသညျစီမံကိန်း" ဖန်ဆင်းရှင်ဂရေဂို Schmidinger (#24 ပြသ) ကိုဖော်ပြထားတယ်
Tobias, အသက် 26, (#25 ပြသ) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတက်ပေးခြင်းသည်မိမိအကြောင်းပြချက်ဆြေးြေိံး
အဆိုပြုထား "Porn လေ့လာရေးဂျာနယ်" (ပြပွဲ #26) Rethinking
သံသယရှိသူ Porn လေ့လာရေး (ဂယ်ရီရဲ့ရေဒီယို show ကို #27)
မာကု Queppet (#28 ပြသ) porn အသုံးပြုမှုဖျက်သိမ်းရေးများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုဆြေးြေိံး
porn-စွဲ Withdrawal ရောဂါလက္ခဏာများ (ပြပွဲ #29)
အမျိုးသမီးများနေ့ Porn-Related ပြဿနာများလွန်း (ပြပွဲ #30) အစီရင်ခံနေ
အဆိုပါ Post ကို-Porn စိတ်ခံစားမှုပြန်ခုန်ထွက် (ပြသ # 31)
Porn ဖြတ်ပြီးနောက်တိုးတက်အာရုံစူးစိုက်မှု (#33 ပြသ)
ဂါ (#20 ပြသ) porn-သွေးဆောင် ED နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖွကွေား
ဂယ်ရီနှင့်ဂါ porn-related ED ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဆွေးနွေးရန် (#9 ပြသ)